yangon – The Voyager
Ride through and around Yangon with Circular Train and Water Bus
မြို့ပတ်ရထား နဲ့ ဝါးတားဘတ်စ် စီးပြီး ရန်ကုန်မြို့ကြီးကို အသွင်သစ်တစ်မျိုးဖြင့် မြင်ကြည့်ခြင်း။ ??️❤️ Yangon Circular Train It wasacloudy Sunday afternoon when we decided to see Yangon’s colorful life by riding the Yangon Circular Train and newly launched Yangon Water Bus. Although we had already covered other public transportation like sidecar (trishaw) ride and bus ride (which is fun […]
? Tharkayta Crocodile farm (သာကေတ မိကျောင်းမွေးမြူရေးစခန်း) ? There isalesser known interesting spot near downtown yangon, Tharkayta Crodcodile farm. It isagovernment-run farm that breeds crocodiles to maintain their population. Its located next to Pazundaung Creek. There are many different sizes of crocodiles divided by age in their respective area. Small crocodiles are very cute […]
Shwedagon Pagoa ( Burmese: ​ရွှေတိဂုံဘုရား) or Shwedagon Zedi Daw ( Burmese: ​ရွှေတိဂုံစေတီတော်) is gilded stupa located in Yangon,Myanmar. The 325 tall Shwedagon pagoda was constructed more than 2,600 years ago. The Shwedagon pagoda is the most sacred Buddhist pagoda in Myanmar,as it is believed to contain relics of the four previous Buddhas of the present […]
Weekend Getaways from Yangon မွန်းကျပ်လွန်းတဲ့ရန်ကုန်ကနေရုန်းထွက်ကြမယ်။
မင်္ဂလာပါရှင့်။ စနေ၊ တနင်္ဂနွေ အားလပ်ရက်တွေမှာ ရန်ကုန်မြို့မှာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ရန်ကုန်မြို့အနီးအနားက နေရာလေးတွေကိုပဲဖြစ်ဖြစ် သွားလည်လို့ရတဲ့ Weekend Getaways လေးတွေကို Share ချင်ပါတယ်ရှင်။ တစ်ပတ် ငါးရက် ရုံးတက်၊ ကျောင်းသွား၊ သင်တန်းတက်နဲ့ ရန်ကုန်မြို့ကြီးမှာနေရတာဟာ တနည်းနည်းနဲ့တော့ စိတ်ပင်ပန်း ငြီးငွေ့ကြတာပါပဲ။ ချောကတော့ များသောအားဖြင့် စနေ၊ တနင်္ဂနွေဆို အသားကုန်အိပ်ပစ်၊ အိပ်ရေးဝရင် စာအုပ်လေးဖတ်နဲ့ အနားယူဖြစ်တာများပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကိုယ်က လျှောက်လည် လျှောက်ကြည့် နေရာသစ်လေးတွေကို စူးစမ်းချင်တတ်သူမို့ စနေ တစ်ရက်တည်း ဒါမှမဟုတ် စနေ၊ တနင်္ဂနွေ နှစ်ရက်စလုံး အချိန်ပေးပြီး ရန်ကုန်မြို့အနီးအနားက နေရာလေးတွေကိုသွားလည်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ချောရောက်ခဲ့ဖူးတဲ့ နေရာလေးတွေထဲကမှ တကယ်လည်း စိတ်အပန်းပြေပြီး အားလပ်ရက်ကို အကျိုးရှိရှိအသုံးချရကျိုးနပ်တဲ့နေရာလေးတွေကို ရွေးပြီးဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ၁။ ဘားအံ […]